I-Novorossiysk, ukuhlala kwe-Myskhako - ukuphumula ogwini lolwandle oluMnyama
"Cape, eya olwandle" - leli yigama elincane elisogwini lolwandle oluMnyama. I-Myskhako isendaweni yaseKrasnodar, eduze kwedolobha laseNovosibirsk. Ingabe i-resort. Waba udumo kulo lonke elaseRussia ngenxa yewayini lakhe namanani aphansi kakhulu. Emzaneni kukhona amahhotela, amahhotela, izikhungo zokuzilibazisa. I-Myskhako inhle kulabo abavakashi abafuna ukuchitha isikhathi ngokuthula nokuthula. Kunezikhungo ezingahle zijabulise, ama-discotheques, imigoqo lapha. Labo abakhetha ukuzijabulisa ebusuku kulo mzana bazobe bezithukuthele. Noma kunjalo, bazokwazi ukuza njalo kuNovorossiysk, njengoba itholakala kakhulu. Uxhumano lokuthutha phakathi kwabo luvamile, ngakho ngeke kube nzima ukufika lapho.
Njengoba sekushiwo kakade, igama laleli dolobha lihunyushwe ngokuthi "i-cape, eya elwandle." Le nkulumo iyincazelo ekholelwa kakhulu yalokho ongakubona ngokuza kulezi zindawo. Noma kunjalo, ulwandle akuyona nje ukukhanga okukhona. Akukude nendawo yedolobha yi-slope esempumalanga yeNtaba yaseKoldun. I-Cape ngokwayo isekhilomitha elilodwa ukusuka emzaneni waseMeskhako. Ukuphumula lapha kuyamangalisa kakhulu, ngenxa yokusondela kwezintaba nolwandle. Kunezakhamuzi ezingaba ngu-8 000 ezihlala njalo, iningi labo isiRussia. Ungakwazi futhi ukuhlangana nezinye izizwe: ama-Ukrainians, amaGeorgiya nabanye. Indawo yokuhlala isendaweni yesikhathi se-UTC + 3. Akukho umehluko ngoMoscow ngesikhathi.
Umzana waseMeskhako unganikeza izakhamuzi? Phela ogwini, ukuhamba ezintabeni futhi, yebo, ukudilika. Kubalandeli be-scuba diving le ndawo yipharadesi yangempela. Lapha awuboni nje kuphela izindawo ezinhle ze-seascape, izimila eziyingqayizivele, kodwa futhi nemikhumbi eyehlisiwe engaphezu kwamamitha angama-20. Ukuze ujabulele ukuhamba nge-snorkeling, akudingekile ukuba uchwepheshe, kunabafundisi abanolwazi abafundisa nokuhamba ngaphansi kwamanzi.
Ngeshwa, ingqalasizinda yedolobha ayikwakhiwa kakhulu. Awekho amahhotela amaningi nezinye izikhungo ezifanayo. Ngokuvamile, izivakashi ziqashisa indawo yazo yokuhlala emkhakheni wangasese isikhathi seholidi labo. Futhi maphakathi nomuzi kukhona izindlu zeholide ezizimele. Awekho namabhishi amaningi kakhulu lapha. Okuthandwa kakhulu yiCentral. Ekuboneni kokuqala, kungase kubonakale kuncane kakhulu, kodwa ubude bayo buba ngu-350 m. Ngaphezu kwalokho ogwini ungathola amabhishi asendle, kodwa unamatshe amaningi. Eminye yonxweme yidwala, yingakho abanikazi bezokuvakasha belulekwa ukuba baqaphele kakhulu. Kodwa lokhu kunenzuzo yayo. Kunezindawo eziningi ezingakhanjelwa yimpucuko. Yingakho izivakashi zikhetha idolobha laseMyskhako. Ukuphumula lapha kuzokunikeza okuhlangenwe nakho okungazelelwe.
I-mini-hotel ethandwa kakhulu emzaneni yi-Myskhako. Itholakala ogwini lolwandle oluMnyama, ubude balo buyi-50 m. Abavakashi, ngisho nangaphandle kokushiya amakamelo abo, bangakuzwa umsindo we-surf, futhi kusukela kumafasitela babukela izikhala zamanzi ezingenamkhawulo.
Ihhotela linamakamelo afanele angu-15: umnotho, izinga elijwayelekile, i-suite encane, i-suite. I-TV, i-Intanethi, umoya wokushisa umoya, isiqandisisi - yilokhu okulindeleke bonke abavakashi abaye bahlala ehhotela "Myskhako". Ukuphumula olwandle kungahle kuhlukaniswe i-sauna enamanzi okubhukuda. Kunezinkantolo ezimbili ze-tennis ensimini yehhotela. Kuzo izivakashi ezihamba ngemoto yangasese, ukupaka kuyatholakala. Kulabo abafisa ukupheka i-shish yabo kebabs emoyeni omusha, indawo ekhethekile yebhayisikili ifakwe.
Ukubuyekezwa kwezivakashi kuningi kakhulu kuphela. Into eyodwa eyaziwa yiziningi zazo kungukuntuleka komgwaqo ohlonyelwe ogwini. Ngeshwa, indlela yodwa yokufinyelela olwandle yilezi zitebhisi ezincane zensimbi. Isibonelo, ukuhla phansi nezingane noma umqhubi kuyinkinga enkulu.
Inzuzo enkulu yendawo yokuvakasha yendawo yilezi zindleko. Izindlu zombili ezikhungweni ezizimele kanye namahhotela azibizi kakhulu. Izinhlelo ezijabulisayo, ukuvakasha akubiza izindlu ezingaphezu kuka-700. Ngomuntu. Okubiza kakhulu kuyoba uhambo oluya ku-winery (cishe ama-ruble angu-450, uma uvakashela ekamelweni lokunambitha). Ukugeza kwangempela eRussia, okusemzaneni, kuzodala izivakashi ezi-ruble 400. Awekho ama-night clubs nama-discos lapha. Ukuthula okuhlukile kulezi zindawo. I-Myskhako (Novorossiysk) inezindawo zokudlela ezincane. Izindleko zamasemini zizobe ziphansi kakhulu kunedolobha elikhulu, kodwa imenyu ayikwazi ukubizwa ngokuthi ihlukile.